ICariage House Cottage kufutshane neAcadia National Park - I-Airbnb
ICariage House Cottage kufutshane neAcadia National Park
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguEarl
UEarl ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Wamkelekile kwikhaya lakho kude nekhaya eBar Harbour ngelixa undwendwela iAcadia National Park kunye neMount Desert Island.
Le ndawo ipholileyo, efikelelekayo yokubaleka inika ubumfihlo obuphezulu kwindawo yasebucolic yasemaphandleni, iseti.
Imbonakalo enomtsalane yokutshona kwelanga kunye nendawo esembindini kuphela kwimizuzu yeendlela, iindlela zokuhamba ngebhayisekile, kunye neevenkile zasedolophini kunye neendawo zokutyela.
NgeCawa ukuya ngoMgqibelo kuphela irenti yokucoca okuphuculweyo. Kukho indawo yokugcina ibhayisekile egqunyiweyo, indawo yokucima umlilo, ukusetyenziswa kwamaphenyane simahla, amaphini okubhexa, iibhatyi zobomi kunye nezixhobo zokukhwela iimoto.
Ngena ngaphakathi kwaye uncome imiqadi yomsedare kunye ne-hemlock efikelela phezulu kwisilingi yebhodi yepine kwindawo yokuhlala. Iifestile ezinkulu kunye nocango olupheleleyo lwepatio lujonge ngaphezulu kwemithi yama-apile yakudala kunye nedlelo elincinci yayingamaxhama anomsila omhlophe kunye nemivundla yekhephu. Umyolelo we-whip o' kunye ne-woodcock zivakala ngorhatya kwaye ikhwelo leengcuka lihlala lifikelela phezulu ukusuka kwintlambo ekufutshane. Ebusuku iinkwenkwezi zikhanya ngakumbi kunayo nayiphi na enye indawo kuNxweme oluseMpuma. Indawo yethu ye "Tribal Council" idlala i-Adirondak Leanto, indawo yomlilo eneenkuni, amanzi abalekayo kunye netafile yepikiniki ecaleni kwendlela yethu yendalo yeenyawo ezingama-400.
I-cottage inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elibandakanya i-2-burner gas cooktop, i-oven microwave, i-toaster, i-coffee maker, i-full-size ifriji / ifriji, i-compact sink, izitya, iiglasi, iimagi, izitya, iimbiza kunye neepani. Ayikho i-oveni kodwa kukho i-gas grill ene-side burner (elungele ukupheka ukutya kwaselwandle okutsha kwasekhaya kwi-cottage's clam, imbaza kunye nembiza yelobster) ngaphandle kwiveranda / kwipatio apho kukho itafile kunye nezitulo zokuphumla ngaphandle. Phezulu kukho indawo yokufunda. I-cottage ikwanezikhokelo zentsimi, iimephu, iincwadi kunye neevidiyo malunga nendalo yendawo kunye nembali yabantu. I-cottage ine-intanethi ye-intanethi ye-broadband yamahhala, i-14-intshi ye-LCD ye-TV, kunye neziteshi ze-cable ze-200 kunye ne-DVD kunye ne-VCR player. Kukho iincwadi ezinemibala kunye neevidiyo zabantwana. I-Pack n' Play ifumaneka ngaphandle kwentlawulo. Kukho umqondiso olungileyo weselula ovela kwipropati.
ICariage House Cottage kwiFama yaseWestard iza inefenitshala epheleleyo nayo yonke into oyifunayo ukuze uphumle, uhlale ukhumbuleka. Indawo yethu esembindini ilungile ekuqaliseni uhambo lwakho lokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukubukela izilwanyana zasendle okanye uhambo lokubhexa. I-cottage ibekwe malunga neemitha ezili-150 ukusuka kwindawo yokuhlala yabucala enkulu kumhlaba owawukade uyifama yosapho. Kukho igaraji engaqhotyoshelwanga phakathi.
Ikhabhathi ecocekileyo, enomoya ibandakanya igumbi lokuhlala elinendawo yomlilo yegesi, isofa ye-futon / ibhedi, izitulo kunye netafile yokutyela kunye nomabonakude. Igumbi lokulala elikumgangatho ophantsi linebhedi elingana nokumkanikazi kunye neofisi, indawo yokuxhoma iimpahla, kunye nefenisha yesilingi. Nangona ingekho i-AC ihlala iphola ngokukhawuleza ebusuku, ngakumbi kwisiqithi. Kukwakho nefeni yesilingi kwindawo yokuhlala kunye nabalandeli abamileyo nabaphathekayo ngokunjalo. Igumbi lokuhlambela linesinki engamampunge, itoliet kunye neshawari enamanzi amaninzi ashushu kunye nesifudumezi sombane. Isethi enye yeelinen kunye neetawuli zinikezelwa ngeveki.
Kuhambo lwakho lwangaphandle kukho i-daypack, iambrela, iintonga zokuhamba, into epholileyo ephathwayo kunye nesibane. Kukwakho nephenyane, amaphini okubheqa, iibhatyi zobomi kunye nezixhobo zokukhwela iikhatophu. Iinkuni zibonelelwa kwindawo yeBhunga leSizwe.
Qaphela: ngenxa yemimiselo yendawo sirenta iiveki ezipheleleyo kuphela, ngeCawa ukuya ngoMgqibelo.
20" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
I-Cariage House Cottage ikwindawo yasemaphandleni eneendawo ezininzi zokuhlala ezinosapho olunye. Yimayile nje ukusuka kwindawo ebukekayo ye-Eagle Lake kunye nokufikelela kuthungelwano lwendlela yemoto ye-Acadia engenamoto yimizuzu nje kude. Izilwanyana zasendle neentaka zininzi. IiWoods ezijikeleze amacala amabini epropathi zibekwe ngonaphakade kwindawo ephantsi egcinwe yi-Acadia National Park. Iimbono ezimangalisayo zokutshona kwelanga kunye nesibhakabhaka esimnyama esimangalisayo sokujonga inkwenkwezi. Amaxhama kunye neekalakuni zihlala zizulazula kwaye zimamele izikhova, amantshontsho enkuni kunye namantshontsho emgama.
Umbuki zindwendwe ngu- Earl
Ukuhlonipha ubumfihlo beendwendwe kubaluleke kakhulu. Abanini bezindlu u-Earl (IsiKhokelo esiBhalisiweyo saseMaine, umbhali, kunye nevolontiya lembali yoluntu) kunye noRoxie, (umfundisi-ntsapho osele esidla umhlala-phantsi kunye nomgadi-gadi okhutheleyo) badla ngokuphuma baye kwezinye iindawo iintsuku ezininzi. Siyavuya ukunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nokwandisa utyelelo lwakho kwi-Acadia National Park, iBar Harbour kunye neNtaba yeDesert Island xa unqwenela.
Ukuhlonipha ubumfihlo beendwendwe kubaluleke kakhulu. Abanini bezindlu u-Earl (IsiKhokelo esiBhalisiweyo saseMaine, umbhali, kunye nevolontiya lembali yoluntu) kunye noRoxie, (umfu…
Inombolo yomthetho: R2021-158
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bar Harbor